I-NdFeB eyomeleleyo kunye neemagnethi zeSmCo zinokuvelisa amandla okuqhuba ezinye izinto ngaphandle konxibelelwano oluthe ngqo, izicelo ezininzi zisebenzisa eli nqaku, ngokufana nokuhlangana kwemagnethi kunye neempompo ezidityaniswe ngombane kwizicelo ezingaphantsi. Imagnetic drive yemiqadi yokuhlanganisa inikezela nge-torque engeyoyonxibelelwano. Ukusetyenziswa kwezi zinto kuhlangana ngemagnethi kuya kuphelisa ukuvuza kolwelo okanye kwerhasi kwizinto zenkqubo. Ngapha koko, ukudityaniswa kwemagnethi kukwagcinwa simahla, ke ngoko kunciphisa iindleko.
Zabiwa njani iimagnethi kwimpompo yokuhlangana ukuze isebenze?
Idityanisiwe NdFeB okanye SmCoiimagnethi ziqhotyoshelwe kwiiringi ezimbini ezixineneyo kwicala ngalinye leqokobhe lesiqulatho kwindlu yempompo. Iringi yangaphandle iqhotyoshelwe kwi-shaft ye-motor; isangqa sangaphakathi kwishafu shaft. Iringi nganye inenani elifanayo leemagnethi ezihambelanayo neziphikisanayo, ezilungiswe ngeepali ezitshintshayo ezijikeleze iringi nganye. Ngokuqhuba isiqingatha sokudibanisa sangaphandle, i-torque idluliselwa ngombane kwisiqingatha sangaphakathi sokudibanisa. Oku kunokwenziwa emoyeni okanye ngesithintelo esingaqukiyo semagnethi, ukuvumela ukwahlukaniswa okupheleleyo kweemagnethi zangaphakathi kwiimagnethi zangaphandle. Akukho zixhobo zonxibelelwano kwiimpompo zemagnethi drive ezivumela ukuhanjiswa kwetorque kuzo zombini ii-angular kunye nokungafani kakuhle.
Kutheni NdFeB okanye SmCo oomazibuthe ezinqabileyo umhlaba ezikhethiweyo yemiqadi yokuhlanganisa yemagnethi?
Izinto zemagnethi ezisetyenziselwa ukuhlangana kwemagnethi zihlala zii-Neodymium kunye ne-Samarium Cobalt iimagnethi ezinezi zizathu zilandelayo:
1. NdFeB okanye SmCo umazibuthe luhlobo iimagnethi esisigxina, nto leyo kulula kakhulu ukuba asebenzise ngaphezu iimagnethi electro ezifuna umbane lwangaphandle.
2. Iimagnethi zeNdFeB kunye neSmCo zinokufikelela kumandla aphezulu kakhulu kuneemagnethi zemveli ezisisigxina. Imagneti yeNeodymium sintered inikezela ngeyona mveliso yamandla iphezulu yayo nayiphi na into ekhoyo namhlanje. Ukuxinana kwamandla okuphezulu kwenza ubunzima bokukhanya kwezinto ezingaphantsi kwemagnethi ukufikelela ekuphuculeni ukusebenza kwayo yonke inkqubo yempompo enobungakanani be-compact.
3. Umhlaba omninzi weCobalt umazibuthe kunye neNeo magnet inokusebenza ngozinzo lobushushu obungcono. Kwinkqubo yokusebenza, njengoko ubushushu obusebenzayo bukhula okanye bushushu obuveliswa yi-eddy yangoku, amandla ombane kunye ne-torque emva koko iya kuncitshiswa kancinci ngenxa yokushisa okungcono kwe-coefficients kunye nobushushu obuphezulu bokusebenza kwe-NdFeB kunye ne-SmCo iimagnethi zenziwe. Kumaqondo athile obushushu aphakamileyo okanye ulwelo olubhubhisayo, umazibuthe weSmCo lolona khetho lukhethekileyo lwemagnethi.
Yintoni imilo NdFeB okanye iimagnethi SmCo ezisetyenziswa yemiqadi yokuhlanganisa yemagnethi pump?
The iimagnethi SmCo okanye NdFeB sintered zinokuveliswa kuluhlu olubanzi imilo kunye nobukhulu. Ukusetyenziswa kokuhlanganiswa kwempompo yamagnetic, ubukhulu becala iimilo zemagnethi zeziibhloko, isonka okanye icandelo learc.
Umvelisi ophambili wokudibanisa okusisigxina kwemagnethi okanye iimpompo ezidityaniswe ngomazibuthe emhlabeni:
Ixesha lokuposa: Jul-13-2021